यस्तो अचम्मको गुफा! भगवान् गणेशको काटिएको शिर राखिएको प्रत्यक्ष देखिन्छ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > यस्तो अचम्मको गुफा! भगवान् गणेशको काटिएको शिर राखिएको प्रत्यक्ष देखिन्छ!
admin December 10, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति	0
एजेन्सी । हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार भगवान् शिवले क्रोधमा आएर गणेशजीको शिर का’टि’दि’ए’का थिए । पछि माता पार्वतीले भनेपछि भगवान् शिवले हात्तीको टाउको ल्याएर जोडिदिएका थिए । तर, भगवान् गणेशको शिर कहाँ राखिएको थियो भन्ने कुरा सायदैलाई मात्र थाहा होला ।
भगवान् शिवले गणेशजीको वास्तविक शिर एउटा गुफामा राखेका थिए । उक्त गुफा भारतको उत्तरखण्डस्थित पिथौरागढमा रहेको छ । यस गुफालाई पाताल भुवनेश्वरको नामबाट पनि चिन्ने गरिन्छ ।
यसको वर्णन स्कन्द पुराणमा गरिएको छ । जहाँ गणेशजीको शिर रहेको छ त्यहाँ भक्तहरुको आस्थाको केन्द्र रहेको छ । त्यहाँ रहेको गणेशजीको मूर्तिलाई आदि गणेश भनेर भन्ने गरिन्छ ।
यो गुफा एउटा विशाल पहाडको ९० फिट भित्र रहेको छ । यो गुफाको खोजी भगवान् आदि शंकराचार्यले गरेका थिए । यस गुफामा भगवान् गणेशको का’टि’ए’को शिरको माथि १०८ शवाष्टक व्रह्मकमल रहेका छन् ।
यो व्रह्मकमलबाट भगवान् गणेशको शिलारुपी मूर्तिमा जल झर्छ । मान्यताका अनुसार यो व्रह्मकमल भगवान् शिवले नै स्थापित गरेका थिए ।
मन्दिरमा आदिगणेशको शिर खस्दै गरेको देखिन्छ । यो गुफामा कालभैरवको जिब्रोको पनि दर्शन गर्न सकिन्छ । यसबारेमा मानिसहरु कालभैरवको मुखबाट पसेर गर्भमा प्रवेश गर्दै पुछारबाट निस्किँदा मुक्ति मिल्ने विश्वास गर्छन् । – एजेन्सीको सहयोगमा
दीपेन्द्रसँग विवाह नजुरेपछि अविवाहित बसेकि सुप्रिया शाहकाे २० बर्षपछि भयो यस्तो!
साउन महिनाको दोस्रो सोमबार भगवान शिवको पूजाआज गरिँदै; शिवको महिमा सहित
रबिना बादी प्रकरणः दर्शककाे अपशब्द र गालीको ओईरो लागेपछि धरधरी रुँदै मिडियामा आईन्
सशस्त्र द्वन्द्वमा १२ वर्षकै कलिलो उमेरमा बलात्कारमा परेकि युवतीको पीडा : होश आउँदा शरीरमा कुनै कपडा थिएन…
अस्ट्रेलियामा पौडी खेल्न पानीमा हा’म्फालेका नेपालीको डु’बेर मृ’त्यु
पोखरामा छतमा टिकटक बनाउने क्रममा लडेर ८ वर्षकि बालिकाको मृत्यु
जेठान भन्छन् ज्वाइँकै कारण बहीनी’ले नाराय’णी नदीमा फाल हानिन् (भिडियो हेर्नुस्)
०७७ साल माघ १५ गते बिहिबार, हेर्नुहाेस तपाईहरूको राशिफल अनुसारकाे भाग्यफल
कञ्चनपुरमा बे’होस अवस्थामा भेटिएकी युवती…
इजरायल रोजगारमा जान के-के चाहिन्छ योग्यता ? कहाँ दिने आवेदन ? (भिडियो सहित)
"यो दाजुको मिर्मिरे आँखा" गीतका सर्जक धनबहादुर अब हामी बीच रहेनन्